Kushanda naMwari Kunoita Kuti Tifare | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kannada Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lamba Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mixe (North Central) Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Ndau Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngangela Nias Norwegian Nyungwe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sena Serbian Serbian (Roman) Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Zande Zapotec (Isthmus)
“Zvatinoshanda pamwe chete naye, tinokutetereraiwo kuti murege kugamuchira mutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari motadza kunzwisisa chinangwa chawo.”—2 VAK. 6:1.
NZIYO: 75, 74
NEI BASA REKUPARIDZA . . .
richiita kuti tifare?
richitiswededza pedyo naMwari uye nevamwe?
1. Kunyange zvazvo Jehovha ari iye Mwari Mukuru kupfuura vamwe vose, akaita kuti vamwe vaitei?
JEHOVHA ndiye Mwari Mukuru kupfuura vamwe vose, ndiye Musiki wezvinhu zvose, uye ane uchenjeri nesimba zvisina magumo. Jobho akabatsirwa naJehovha kunzwisisa izvozvo. Pashure pekunge Jehovha amubvunza mibvunzo ine chekuita nezvinhu zvaakasika, Jobho akapindura kuti: “Ndava kuziva kuti munokwanisa kuita zvinhu zvose, uye hapana chamunofunga kuita chamungatadza.” (Job. 42:2) Kunyange zvazvo Jehovha achikwanisa kuita chero chaanenge ada pasina anomubatsira, kubvira kare, rudo rwake rwakaita kuti ashandewo nevamwe pakuita kuti chinangwa chake chizadzike.
2. Jehovha akashanda neMwanakomana wake pabasa ripi rinokosha?
2 Mwari akatanga kusika Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga. Jehovha akashanda neMwanakomana wake pakusika zvimwe zvinhu zvose, zvinooneka nezvisingaoneki. (Joh. 1:1-3, 18) Muapostora Pauro akanyora nezvaJesu achiti: “Pachishandiswa iye zvimwe zvinhu zvose zvakasikwa zviri kumatenga nezviri panyika, zvinhu zvinooneka nezvinhu zvisingaoneki, pasinei nokuti zvingava zviri zvigaro zvoumambo here kana ushe kana hurumende kana vanhu vane masimba. Zvimwe zvinhu zvose zvakasikwa pachishandiswa iye uye nokuda kwake.” (VaK. 1:15-17) Saka Jehovha akashanda neMwanakomana wake pakusika, uye akaita kuti vanhu vazive nezvebasa iroro rinokosha rakaitwa neMwanakomana wake.
3. Jehovha akapa Adhamu basa rei, uye nei akadaro?
3 Jehovha akaitawo kuti vanhu vashande pamwe chete naye. Somuenzaniso, akapa Adhamu basa rekupa mhuka mazita. (Gen. 2:19, 20) Adhamu anofanira kunge ainakidzwa chaizvo nekucherechedza mhuka idzi, achiona zvadzaiita, obva adzipa mazita anoenderana nadzo. Jehovha ndiye akanga asika mhuka idzi saka aigona kungodzipa mazita acho ega. Asi akapa Adhamu basa iri, zvichiratidza kuti ane rudo. Mwari akapawo Adhamu basa rekuita kuti nyika yose ive Paradhiso sezvakanga zvakaita munda weEdheni. (Gen. 1:27, 28) Zvinosuwisa kuti Adhamu akazoramba kushanda naMwari, zvikaita kuti iye nevana vake vose vaizoberekwa vapinde mumatambudziko.—Gen. 3:17-19, 23.
4. Vamwe vakashandawo sei pamwe naMwari pakuzadzisa chinangwa chake?
4 Jehovha akazoitawo kuti vamwe vanhu vashande pamwe naye pakuzadzisa chinangwa chake. Noa akavaka areka yakaita kuti iye nemhuri yake vapone pakaitika Mafashamo munyika yose. Mosesi akabudisa vaIsraeri muIjipiti. Joshua akapinza rudzi irworwo muNyika Yakapikirwa. Soromoni akavaka temberi muJerusarema. Mariya akava amai vaJesu. Vanhu vose ava vakatendeka uye vamwewo vakawanda, vakashanda pamwe naJehovha kuti vaite kuda kwake.
5. Tinogona kushandawo pabasa ripi, uye Jehovha aifanira kushanda pamwe chete nesu pabasa iri here? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
5 Jehovha anodawo kuti tiite zvose zvatinogona pakutsigira Umambo hwaMesiya. Pane zvakawanda zvatinogona kuita mubasa rake. Kunyange zvazvo tingatadza kuita zvimwe zvacho, tose tinokwanisa kuita basa rekuparidza mashoko akanaka oUmambo. Jehovha akanga asingafaniri hake kushanda pamwe chete nesu pakuita basa iri. Aigona kungotaura ega nevanhu vari panyika ari kudenga. Jesu akataura kuti Jehovha aigona kutoita kuti matombo ashevedzere nezvaMambo Mesiya. (Ruka 19:37-40) Asi Jehovha anotibvumira kuti tive “vashandi pamwe chete” naye. (1 VaK. 3:9) Muapostora Pauro akanyora kuti: “Zvatinoshanda pamwe chete naye, tinokutetereraiwo kuti murege kugamuchira mutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari motadza kunzwisisa chinangwa chawo.” (2 VaK. 6:1) Taisatombokodzera kushanda pamwe chete naJehovha asi akatisarudza, uye izvozvo zvinoita kuti tifare chaizvo. Regai tione zvimwe zvinoita kuti tifare.
6. Mwanakomana waMwari akatsanangura sei manzwiro aaiita nekushanda pamwe chete naBaba vake?
6 Kubvira kare, vashumiri vaJehovha vaifadzwa chaizvo nekushanda pamwe chete naMwari. Asati auya panyika, Mwanakomana wedangwe waMwari uyo anotaurwa nezvake seuchenjeri akati: “Jehovha akandisika kuti ndivepo sokutanga kwenzira yake . . . Ndaiva padivi pake ndiri mhizha, uye ndakava munhu waaida kwazvo zuva nezuva, ini ndichifara pamberi pake nguva dzose.” (Zvir. 8:22, 30) Jesu aifara paaishanda pamwe chete naBaba vake, achinakidzwa nebasa raaiita, uye kuziva kuti Jehovha aimuda kwaimufadza. Zvakadini nesu?
Hapana chimwe chinhu chingatifadza kupfuura kudzidzisa mumwe munhu chokwadi (Ona ndima 7)
7. Nei basa rekuparidza richiita kuti tifare?
7 Jesu akati kupa uye kugamuchira kunoita kuti tifare. (Mab. 20:35) Takafara patakadzidziswa chokwadi, uye tinofara chaizvo patinochidzidzisawo vamwe. Patinoita basa iri, tinoona vanhu vane chido chekuziva nezvaMwari vachifara chaizvo pavanotanga kunzwisisa nezvake uye chokwadi chiri muShoko rake. Zvinotibaya mwoyo patinoona vachichinja mafungiro uye mararamiro avo. Tinoziva kuti basa rekuparidza mashoko akanaka rinokosha chaizvo. Rinoita kuti vaya vanoyananiswa naMwari vawane mukana wekuzorarama nekusingaperi. (2 VaK. 5:20) Hapana rimwe basa ringaita kuti tifare kupfuura rekubatsira vamwe kuti vasarudze nzira inoita kuti vazorarama nekusingaperi.
8. Vamwe vanhu vakatii nezvekushanda kwavanoita naJehovha?
8 Tinofarawo chaizvo patinoziva kuti tiri kufadza Jehovha uye kuti anokoshesa zvatinoita pakumushumira. (Verenga 1 VaKorinde 15:58.) Marco uyo anogara kuItaly anoti: “Ndinofara chaizvo kuziva kuti ndiri kupa Jehovha zvose zvandinogona, kwete mumwe munhu anozokanganwa zvandakaita.” Franco uyo anoshumirawo ari kuItaly anoti: “Achishandisa Shoko rake nezvimwe zvatinopiwa nesangano rake, Jehovha anotiyeuchidza zuva nezuva kuti anotida, uye kuti zvose zvatinomuitira zvinokosha, kunyange zvazvo tingaona sokuti hapana zvatiri kuita. Ndosaka kushanda pamwe chete naMwari kuchiita kuti ndifare uye kuti upenyu hwangu huve nechinangwa.”
KUSHANDA NAMWARI KUNOTISWEDEDZA PEDYO NAYE UYE NEVAMWE
9. Jesu aiva pedyo zvakadini naJehovha uye chii chakaita kuti adaro?
9 Patinoshanda pamwe chete nevanhu vatinoda, tinova pedyo navo uye tinopedzisira tava kuvaziva kupfuura zvataimboita. Tinoziva zvinangwa zvavo uye zvavari kuita kuti vazvizadzise. Jesu akashanda pamwe chete naJehovha kweanenge mabhiriyoni emakore, uye izvi zvakaita kuti vave nerudo rwakadzama rusingaperi. Achitaura nezvekuti aiva pedyo zvakadini naBaba vake, Jesu akati: “Ini naBaba tiri vamwe.” (Joh. 10:30) Vakanga vakanyatsobatana, vachishanda pamwe chete vachifara.
10. Nei basa rekuparidza richiita kuti tive pedyo naMwari uye nevamwe?
10 Jesu akakumbira Jehovha kuti achengete vadzidzi vake. Akataura chikonzero chacho paainyengetera achiti: “Kuti vave vamwe sezvatiri.” (Joh. 17:11) Patinoita zvinodiwa naMwari, uye patinoita basa rekuparidza, tinowedzera kuziva Mwari. Tinoona kuti zvakanakirei kuramba tichivimba naye uye tichimuteerera. Patinoswedera pedyo naMwari, anoswederawo pedyo nesu. (Verenga Jakobho 4:8.) Tinovawo pedyo nehama nehanzvadzi dzedu dzatinonamata nadzo nekuti tine zvinangwa zvakafanana, tinosangana nematambudziko akafanana uye zvinhu zvinotifadza zvakafanana. Saka tinoshanda pamwe chete, tinofara pamwe chete uye tinotsungirira pamwe chete. Octavia uyo anogara kuBritain anoti: “Kushanda naJehovha kunondiswededza pedyo nevamwe nekuti kunoita kuti tipedzisire tava kunyatsowirirana sezvo ushamwari hwedu huchibva pakuti tine chinangwa chimwe chete.” Ndiwo manzwiro aunoitawo here? Haunzwiwo uchida kuva pedyo nevamwe here paunoona vachiedza kufadza Jehovha?
11. Chii chichaita kuti tiwedzere kuva pedyo naJehovha uye nehama dzedu munyika itsva?
11 Tinoda Mwari uye tinoda hama dzedu. Rudo irworwo ruchatowedzera kusimba patinenge tava munyika itsva. Funga nezvebasa rinonakidza riri pamberi apa. Pane vakafa vachamutswa vatichagamuchira uye vachada kudzidziswa nezvaJehovha. Nyika ichachinjwa kuti ive paradhiso. Basa iri richange rakakura, asi tichafara kushanda pamwe chete tichitongwa neUmambo hwaMesiya uye tichafara kubvisirwa chivi chatiinacho. Vanhu vose vachawedzera kudanana uye kuda Mwari uyo ‘achagutsa zvinodiwa nezvinhu zvipenyu zvose.’—Pis. 145:16.
KUSHANDA NAMWARI KUNOTIDZIVIRIRA
12. Basa rekuparidza rinotidzivirira sei?
12 Tinofanira kushanda nesimba kuti tisabve pana Mwari. Tinorarama munyika iri kutongwa naSatani Dhiyabhorosi, uyewo tine chivi, saka zviri nyore kuti titange kuva nemafungiro akaipa uye kutevedzera vanhu vari munyika. Mudzimu wenyika unogona kuenzaniswa nemvura iri murwizi iri kuedza kutikukura. Tinotofanira kushambira zvakasimba kuti tisakukurwe. Saka kuti tisakanganiswa nemudzimu wenyika yaSatani tinofanirawo kushanda nesimba. Patinoparidza, pfungwa dzedu dzinova pazvinhu zvinokosha uye zvakanaka, kwete pazvinhu zvinoita kuti kutenda kwedu kuve zinyekenyeke. (VaF. 4:8) Kuparidza kunoita kuti tiwedzere kuva nechokwadi nezvinhu zvatinotenda, zvoita kuti tirambe tichifunga zvatakavimbiswa naMwari wedu ane rudo uye mitemo yake. Kunoitawo kuti tigare takashonga nhumbi dzokuzvidzivirira nadzo.—Verenga VaEfeso 6:14-17.
13. Imwe hama yekuAustralia inonzwa sei nebasa rekuparidza?
13 Kana tikaramba tichishingaira pabasa rekuparidza uye patinenge tichiita mamwe mabasa ane chekuita nekunamata, hatizogari tichingofunga matambudziko edu, uye izvozvo zvinotidzivirira. Joel uyo anogara kuAustralia anoti: “Basa rekuparidza rinoita kuti ndione zvinhu sezvazviri. Rinondibatsira kuziva matambudziko ari kusangana nevamwe vanhu uye rinoita kuti ndione kuti kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri kuri kundibatsira sei muupenyu. Basa rekuparidza rinondibatsira kuti ndisazvikudza uye rinoita kuti ndiwedzere kuvimba naJehovha uye kuvimbawo nehama nehanzvadzi dzangu.”
14. Chii chinoratidza kuti tinobatsirwa nemudzimu waMwari?
14 Kuparidza kunoita kuti tinyatsova nechokwadi chekuti tine mudzimu waMwari. Somuenzaniso, ngatitii wapiwa basa rekufamba uchipa vanhu vemunharaunda yenyu chingwa. Unenge usingabhadharwi, uye haudzorerwi mari yaunenge washandisa. Paunenge uchiita basa racho unotanga kutoona kuti vanhu vakawanda havasi kutomboda chingwa chacho, uye zviri kutoita kuti uvengwe nevanhu. Unofunga kuti ucharamba uchiita basa iri kwenguva yakareba sei? Zvimwe unobva watoneta, wosiyana nebasa racho. Asi gore negore tinongoramba tichiita ushumiri hwedu pasinei nekuti hatibhadharwi uye kuti tinoshorwa nekusekwa. Izvi hazviratidzi here kuti tinobatsirwa nemudzimu waMwari?
KUSHANDA NAMWARI KUNORATIDZA KUTI TINOMUDA UYE TINODA VAMWE
15. Basa rekuparidza rinobatsira sei pakuzadzisa chinangwa chaMwari chaakasikira vanhu?
15 Chimbofunga nezvekubatsira kunoita basa rekuparidza pakuzadzisa chinangwa chaJehovha chaakasikira vanhu. Aida kuti vanhu vararame panyika vasingafi, uye haana kuchinja chinangwa ichocho pakatadza Adhamu. (Isa. 55:11) Akatoronga kuti vanhu vanunurwe pachivi nerufu. Achishanda pamwe chete naBaba vake pakuzadzisa chinangwa ichocho, Jesu akauya panyika ndokufira vanhu. Asi kuti vanhu ivavo vazobatsirwa nechibayiro ichocho, vanofanira kutanga vanzwisisa zvinodiwa naMwari, voteerera. Saka Jesu akadzidzisa vanhu kuti Mwari anoda kuti vaite sei, uye akarayira vadzidzi vake kuti vadzidzisewo vamwe. Patinobatsira vanhu kuti vayananiswe naMwari, tinenge tichitoshanda pamwe chete naMwari pakuzadzisa chinangwa chake chinoratidza rudo chekununura vanhu pachivi nerufu.
16. Basa redu rekuparidza rakabatana papi nemirayiro mikuru yaMwari?
16 Patinobatsira vamwe kuti vazowana upenyu husingaperi tinenge tichiratidza kuti tinovada uye kuti tinoda Jehovha, “uyo anoda kuti vanhu vemarudzi ose vaponeswe uye vasvike pakuva nezivo yakarurama pamusoro pechokwadi.” (1 Tim. 2:4) Paakabvunzwa kuti ndeupi murayiro mukuru pane mirayiro yose yakapiwa vaIsraeri, Jesu akapindura kuti: “‘Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose.’ Uyu ndiwo murayiro mukuru pane yose uye wokutanga. Wechipiri, wakafanana nawo, ndouyu, ‘Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.’” (Mat. 22:37-39) Patinoita basa rekuparidza tinenge tichiratidza kuti tinoteerera mirayiro iyi.—Verenga Mabasa 10:42.
17. Unonzwa sei neropafadzo yaunayo yekuparidza mashoko akanaka?
17 Jehovha akatikomborera zvikuru. Akatipa basa rinoita kuti tifare, rinotidzivirira pane zvekunamata, rinoita kuti tive pedyo naye uyewo nevamwe. Patinoparidza tinenge tichiratidzawo kuti tinoda Mwari nevanhu. Vanhu vaMwari munyika yose vane mamiriro ezvinhu akasiyana-siyana, asi pasinei nekuti vakura kana kuti vadiki, varombo kana kuti vakapfuma, vane utano hwakanaka kana kuti havana, mamiriyoni aya ari kuita zvese zvaanogona kuti aparidzire vamwe. Pamwe unonzwa sezvinoita Chantel anogara kuFrance uyo akati: “Munhu ane simba guru kupfuura vose pasi nekudenga, Musiki wezvinhu zvose, Mwari anofara, ari kundiudza kuti: ‘Enda! Taura! Taura uchindimiririra, taura zvichibva pamwoyo. Ndinokupa simba rangu, Shoko rangu Bhaibheri, rubatsiro runobva kudenga, vekushanda navo panyika, ndicharamba ndichikudzidzisa, uye ndichanyatsokurayiridza panguva yakakodzera.’ Takakomborerwa chaizvo kuita zvatinokumbirwa naJehovha uye kushanda pamwe chete naMwari wedu!”